भिडियो – Nepali Taja Khabar
अहिले चितवनकी सबिता भण्डारीको घटनाले सामाजिक संजाल निकै तातेको छ, बिभिन्न माध्याम बाट सविताको न्याएको लागि पहल गरिरहेका छन् । श्रीमानले यातना दिने ससुराले यौ’ ‘न स’म्पर्क गर्न समेत माग गर्ने, प्रा’इभे’ट पा’र्ट’हरु सु’म्सु’म्या’उँदै बिभिन्न ह’र्कत गर्ने गरेपछि उनले बाध्य भएर बस्न परेको अवस्थामा उनले अब बाहिर कुरा ल्याउने भईन भनेर परिवारले नै सिध्याएको भन्ने […]
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२ , पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री)को विवाह रुपन्देहीमा भएको थियो । । तर विवाह गरेको २७ दिनमै उनको रहस्यम निधन भएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बर्माचोकदेखि करिब दुई सय मिटर भित्र घर भएका ३० वर्षियप्रदिप भट्टराईसँग विवाह भएको २७ दिनमै दुखद घटना भएको हो । उनीहरुको विवाह रुपन्देहीको […]
दरवार ह त्याकाण्ड पछी कहाँ छन बिरेन्द्रका दुइ नातीनिहरु ? गुमनाम किन छन ? खुल्यो रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस)
लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रका नातिनी गिर्वाणी र सुरंगनालाई धेरैले खोजिरहेका छन् तर उनीहरु अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छैनन् । सञ्चारमाध्यममा मात्रै होइन औपचारिक कार्यक्रममा समेत कमै मात्रै देखिने गरेका छन् उनीहरु । सामाजिक सञ्जाल र सर्च इन्जिनमा समेत उनीहरुको गतिविधि पाउन मुस्किल छ । उनीहरु कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पारिवारका अत्यन्त नजिकका आफन्त […]